Barida iyo Barashada | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Hubinta in dhammaan ardayda ay ka fekeraan oo ay raacaan himilooyinkooda ugu sarreeya waxay u baahan tahay macallimiin ku dhiirrigelisa ilmo kasta xiisaha ay u qabaan inay ku fiicnaadaan kalsooni iyo rajo, manhaj u oggolaanaya xulasho iyo dabacsanaan, iyo nidaam waxbarasho oo taageeraya arday kasta inuu si guul leh u dhammaystiro qorshaha waxbarashada shakhsi ahaaneed.
Gudaha Dugsiga Degmada Minnetonka, waxaan hadda ka hirgalineynaa qorshe hawleedyo istiraatiiji ah oo diirada saaraya kala duwanaanta waxbarista, shaqsiyadeeynta waxbarashada ardayda, adeegsiga tikniyoolajiyadda si loo kordhiyo guusha ardayda, iyo hubinta hababka ugu wanaagsan ee waxbarista iyo qiimeynta fasal kasta. Macallimiinteena iyo qoysaskeennu waxay rajo weyn ka qabaan ardaydeena, ardaydeenuna waxay u kacaan loolanka.
Waxqabadka ku saabsan qiimeynta ayaa muujineysa in ardaydeena ay si heer sare ah u soo bandhigeen. Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad baratid manhajkeena iyo barnaamijyada iyo adeegyada kale ee taageera barida iyo barashada iskuuladeena. Haddii aad qabtid su'aalo ama talo bixin, waan soo dhaweyneynaa ra'yigaaga.